Suuqgeyntu Ku saleysan Xisaabeed Marketo: Maxaad U Baahan Tahay Inaad Ogaato | Martech Zone
Suuqgeyntu Ku saleysan Xisaabeed Marketo: Maxaad U Baahan Tahay Inaad Ogaato
Isniin, Oktoobar 10, 2016 Sabti, Febraayo 13, 2021 Guy Goldstein
Marketo ayaa sii daayay Suuq Xisaab Xisaabeed (ABM) qayb ka mid ah dadaallada sii kordhaya ee si wanaagsan loogu taageerayo xiriirada ganacsiga. In kasta oo aaladda lafteeda ay tahay nooc hore ayna muujineyso heshiis ballaadhan, haddana waxaa jira qaabab ABM loogu talagalay inuu wax uga beddelo ganacsiyada bilaabaya adeegsiga barta. Marketo wuxuu qeexayaa saddex walxood oo kala duwan oo ah xalkeeda ABM:
Awoodda bartilmaameedka iyo maaraynta xisaabaadka iyo liisaska akoonnada.
Awoodda ku lug lahaanshaha xisaabaadka bartilmaameedka kanaallada oo dhan.
Awoodda lagu cabiro saamaynta dakhliga ee xisaabaadka la bartilmaameedsanayo.
Marketo's warqad cad oo ku taal ABM ayaa bixisa Faa'iidooyinka ABM si loo wanaajiyo suuq geynta ROI, wadista dakhliga loo aaneeyo, soosaarid beddelaad badan, soo saar hogaamiyayaal aqoon leh iyo isku toosinta iibka iyo suuqgeynta.
84% suuqleyda ayaa sheegaya in istiraatiijiyadda ABM ay ka fiicnaanayaan maalgashiyada kale ee suuq geynta sida ay sheegtay ITSMA
97% ee suuqleyda waxay ku guuleysteen ROI sare leh ABM marka loo eego dadaallada kale ee maareynta ah sida ay qabto kooxda Alterra
92% ka mid ah suuqleyda B2B ee adduunka oo dhan waxay tixgeliyaan ABM si aad ah ama aad muhiim ugu ah dadaalkooda guud ee suuq geynta sida ku cad Go'aannada Sirius
208% dakhli dheeraad ah ayaa ka dhasha suuq geynta shirkadaha iswaafajiyay iibinta iyo kooxaha suuq geynta sida ku xusan MarketingProfs
Dhexdhexaadinta Go'aannada Ganacsi
Maaddaama tikniyoolajiyadda suuqgeynta ay horumar sameysay, oo ay la socoto xirfadda iyo hal-abuurnimada hormoodka teknoolojiyadda suuqgeynta, nidaamyada ay dadku u qaabeyn karaan kuna hirgelin karaan si guul leh waxay noqdeen kuwo sii kordhaya. Celceliska diiwaanka hogaaminta / xiriirka wuxuu leeyahay 100 ama in kabadan, halka iskucelceliska fulinta maanta ay kujiraan 300-500 qulqulatooyin shaqo oo iskuxidhan.
MarkM's ABM waa macne loogu talagalay bartamaha xisaabaadka istiraatiijiga ah ee lagu beegsanayo go'aamada dhammaan baahiyaha suuqgeynta shirkadda. Naqshadaynta ABM waa tallaabo horumarineed oo horumarineed oo loogu talagalay aaladaha suuqgeynta oo dhaqan ahaan u bixiyay tas-hiilaad aad u fiican oo koox-kooxeed iyo bartilmaameed u ah aaladda laakiin inta badan waxay la halgamayeen inay macluumaadkaas la wadaagaan qalab kale.
Go'aaminta istiraatiijiyadeed ee istiraatiijiyadeed waxay hubin doontaa in shirkaddu ay sii wadi karto isku dheelitirkeeda gudaha iyo in shirkaduhu si dhakhso leh ula qabsan karaan suuqa kala beddelaya.
The isku dhac inta udhaxeysa Iibka iyo Suuqgeyntu waa gabowdaa sida waqtiga laftiisa. Qalabaynta Suuqgeynta ayaa dhalisay ballanqaadka xallinta khilaafkan iyadoo la keenayo Madaxa Sarkaalka Dakhliga - Riyada isku-dhafan iyo kooxda iibinta iyo Suuq geynta ku hadalka hal luuqad iyo ka shaqeynta hal hadaf.
Nasiib darro, ballanqaadkani wuxuu ahaa mid adag oo lagu soo bandhigo booska tikniyoolajiyadda suuqgeynta. Shirkadahani waxay fahmeen baahida loo qabo in la waafajiyo oo xitaa la soo saaro qalabyo gaar ah oo loogu talagalay ujeedadaas, laakiin inta badan waxay isku dayeen inay soo jiidaan iibinta si ay ula jaan qaadaan suuqgeynta, Waxay arkeen qulqulka oo foorara.
Luuqadda ABM waa luuqadda Iibka, oo si cad loogula socodsiiyay Suuqgeynta.
Isbedelka aragtidan ayaa ballan qaadaya inuu dhiirrigeliyo iskaashi ballaaran oo ku aaddan wadaag, iyo yoolal la wada oggol yahay. Marketo's ABM wuxuu ujeedkiisu yahay inuu bixiyo dashbood wadaag ah, cabir wadaag ah, yoolalka la wadaago.
Fahmitaanka Habka Meta-Iibka
Wareegga iibsiga B2B waa wareeg wareeg ah oo had iyo jeer ku lug leh dhowr daneeyayaal heerar kala duwan oo muhiim u ah shirkad. Wareegga iibsigu wuu dheeraan karaa, xawaaruhuna waligiis isma waafaqsana. Iyada oo ay taasi jirto, qaabka caadiga ah ee Iibinta iyo Suuqgeynta ee la xiriira shirkad bartilmaameed ah waxay ku saleysan tahay shakhsiga. Mararka qaarkood waxay ku saleysnaan kartaa shaqsiyaad badan, laakiin waa dhif iyo naadir in la helo dad awood u leh inay kormeeraan dhammaan xiriirada rajo kasta oo la qabo.
Haddii aad waligaa isticmaashay Salesforce, waxaad u badan tahay inaad aqoon u leedahay ereyada sida Go'aan Qaade, Fududeeyaha, Iyo Kooxda heysata horyaalka - Dhammaan dadkani waxay door muhiim ah ka ciyaaraan sidii ay rajada u noqon lahayd macmiil, laakiin mid kastaaba wuxuu leeyahay kaalin ka duwan heerka ay muhiimaddu u kala duwan tahayna midda xigta.
Intaas waxaa sii dheer, maahan in shakhsiyaadkan oo dhan lagu aqoonsado nidaamkaaga, oo haddii aad waqtigaaga oo dhan ku lumiso inaad iskudayeyso inaad saameyn ku yeelato go'aan-sameeyaha shirkadda rajada, waxaad si dhakhso leh u baran doontaa inay haystaan ​​waqti aad u yar oo firaaqo ah oo lagu qanci karo.
Habka ABM wuxuu ujeedkiisu yahay inuu sii dheereeyo wadahadalka oo kaliya halka ugu horeysa ee xiriirka, iyo xitaa ka baxsan kaliya la xiriirka shaqsiyaadka aad soo ogaatay Ujeeddadeedu waa in loo sameeyo luqad isku mid ah xisaabaadka istiraatiijiga ah iyo in lala xiriiro qof kasta oo loo aqoonsan karo inuu qayb ka yahay xisaabaadkaas.
Dheeraad ah, habka ABM wuxuu dheereyn doonaa aagga iibka ee diiradda, si markaa loogu wargaliyo howlaha muhiimka ah ee la xiriira muhiimad yar xiriirada ku jira koontada rajada, iyaga oo siinaya aragti ku saabsan mugdi hore u qarsoonaa ee habka iibsiga, oo ay la socdaan fikradaha waxqabadka leh ee gacan ka geysanaya ka faa'iideysiga aragtidaas.
Soo bandhigid: Sawirro ay bixiyeen Suuqa.
Tags: abmabm roixeeladaha abmsuuq geynta xisaabtab2bwareegga iibsiga b2biibinta b2bfarsamada casriga ahsuuqosuuqa abm
Guy waa La-Taliyaha Suuqgeynta iyo La-Taliyaha Hawlaha. Teknoolojiyada G8 wuxuu adeegsadaa qaab dhammaystiran oo isku dhafan oo otomaatig ah oo suuq geyn ah, kana soo qaadanaya suuq-geynta dhaqanka iyo waayo-aragnimada suuq-geynta macluumaadka si looga caawiyo macaamiisha inay gaaraan guul. Ku tiirsanaanta waayo-aragnimada iyo falanqaynta G8 waxay si dhow ula shaqaysaa macaamiisheeda si ay u siiso si habsami leh, suuq-geyn isku dhafan oo loogu talagalay ganacsiyada macaamiisha ah.